Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Michy Batshuayi Nwa akwukwo akuko karia ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara “Batsman“. Anyị Michy Batshuayi Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọ nwere iwepu ihe mgbaru ọsọ dị ịtụnanya mana ole na ole na-atụle Michy Batshuayi's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Michy Batshuayi Akụkọ nwata - mmalite na ndụ ezinụlọ:
Malite na, Michy Batshuayi Atunga mụrụ na 2nd nke Ọktoba 1993 na Brussels, Belgium. A mụrụ ya nne ya, Viviane Leya Iseka na nna ya, Pino Batshuayi.
Ndị nne na nna abụọ ahụ sitere n'agbụrụ Afrịka wee malite mgbọrọgwụ ha na Democratic Republic of Congo. Ha kwagara Belgium ịchọ ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ na iji lekọta ụmụ ha nke ka na -amụbeghị amụ.
N'ịbụ onye na-eto eto na Brussels, Young Batshuayi nwere nkwado nke ndị nne na nna na-ahụ maka egwuregwu na-agba ya ume na nwanne ya Aaron Leya Iseka (nakwa ndị na-agba bọl) iji zụlite ma na-eme egwuregwu ha nwere mmasị maka.
Eziokwu ahụ bụ na Bathshuayi gosipụtara ike nke ịgba bọọlụ nke mere ka ọ kwalite nkwado ha nke na - emeghị ka ọ pụta n'etiti ndị ọgbọ ya mana ọ na - agagharị na nwanne ya nwoke nke ọ họọrọ ma nwee mmasị na football.
N'oge na-adịghị anya ndị nne na nna Batshuayi nyere nkwado na agụụ ya maka football site na ịdenye aha ya na agụmakwụkwọ ndị ntorobịa, RFC Evere, nke mbụ n'etiti ndị ntorobịa anọ ebe ọ malitere ọrụ ya.
Michy Batshuayi Biography Eziokwu - Nrụpụta Ọrụ:
Otu egwuregwu bọọlụ nke amatapụtara Batshuayi n'oge klọb ndị ntorobịa ya bụ ọchịchọ ya iji bọl na -agba ogologo oge na -agaghị agafe, àgwà nke mere ka ndị otu ya were ya dị ka onye na -achọ naanị ọdịmma onwe ya.
Ka o sina dị, ọ nwetara ihu ọma nke ndị na -eme egwuregwu sitere na klọb ndị ọzọ bụ ndị hụrụ karịa ka ọ hụrụ ọdịmma onwe ya.
Ihe ama ama n'etiti ọtụtụ ọrụ ntorobịa ya bụ ịkwaga na klọb ndị ntorobịa Anderlecht na 2007 ebe ọ na-egwuri egwu dị ka onye na-aga n'ihu wee nyefee ebumnuche.
Ụdị ụlọ elu ya ahụghị ọkwa klọb Standard Liège nke nwetara ọrụ ya na 2008.
Batshuayi tụrụ onwe ya niche na klọb ya na nnukwu ọmarịcha arụmọrụ ya wee bulie ya na ndị otu okenye mgbe ọ bụ agadi 18.
Michy Batshuayi Biography - Bilie ka ewu ewu:
Batshuayi abụghị onye ga -akwụsị inwe ọganihu n'ọrụ ọ nwere mmasị na ya. Ụdị elu ya nọgidere na-ahụ ya ka o meriri ihe mgbaru ọsọ 21 n'oge oge 2013/2014 maka Standard Liège.
Ngosipụta n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ mere ka o nweta nturu ugo Ebony Shoe nke enyere maka nnabata ndị egwuregwu kacha mma n'Afrịka na ndị otu nke mbụ na Belgium.
Bathshuayi gara n'ihu na nka nka na Marseille, klọb French ọ bịanyere aka na ya na 2014.
Ọ bụ na Marseille ka ụdị goolu ya nwere mmasị nke ndị otu Bekee kacha elu gụnyere Chelsea FC na Westham. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Michy Batshuayi enyi nwanyị na nwunye ga -abụ:
Batshuayi bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ ama ama ama ama nke na -akpachapụ anya maka ndụ mmekọrịta ha. Nke a emeela ka onye ọ bụla na-atụgharị uche na onye mara mma mara mma nwere ike ịkpa ugbu a.
A hụbeghị nwanyị ọ bụla na ya na mmemme ma ọ bụ ọpụpụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ kwenyere na ọ dị mma idobe ndụ onwe ya na nzuzo, ndị ọzọ kwenyere na ọ bụ naanị oge tupu ekpughere akpa ya ma ọ bụ enyi nwanyị ya.
Jide n'aka, anyị ga -enye mmelite na mmepe n'akụkụ a ka ha na -eme.
Michy Batshuayi mbipụta FIFA:
Michy so n'òtù egwuregwu ndị na-eche banyere ntụle ya na EA Sports 'egwuregwu egwuregwu kachasị mma. Lelee mmeghachi omume ya na nkwụsị 2018 FIFA dị n'okpuru ebe a;
Michy Batshuayi Biography Eziokwu - Okwu dị ka ekwesighi ekwesighi:
Ọ bụ ezie na Batshuayi nọ na Chelsea, ọ na-abanye n'ọkụ dị ọkụ mgbe ihe nkiri nke egwuregwu zuru oke pụtara ka ọ jide ya ọchị na ibe ya Alvaro Morata maka ịta ntaramahụhụ.
Ihe merenụ mere n'oge mmeri Chelsea meriri Arenal na ngwụcha nke ọta obodo 2017. Ejiri Morata dochie Batshuayi n'oge nkeji 74 nke egwuregwu maka enweghị mmasị.
Ejiri eji 1-1 were mechie egwuregwu ahụ, na-ahapụ ntaramahụhụ iji kpebie onye mmeri. Alvaro Morata tinyere Thibaut Courtois Agbaghara otu penariti nke hụrụ ka Arsenal meriri n'asọmpi a. Ihe na -ewe ndị Fans iwe bụ mgbe eserese pụtara igosi Batshuayi na -achị ọchị n'azụ Morata onye o doro anya na ọ na -ewute ya.
Otú ọ dị, Batshuayi gara na nkeji oge Twitter ka ọ gbanwee ihe o weere dị ka echiche ezighi ezi site n'ikwu na:
“Chaị, lee ụfọdụ ndị kwenyere n'ezie na m chịrị onye otu egwuregwu m ọchị ma / ma ọ bụ anyị tufuo? Ndoo iwe, mana m adighi ”
Michy Batshuayi Biography Eziokwu - Ịhụnanya maka ihe ọchị:
Batshuayi nwere agụụ maka ikiri na ịgbaso usoro eserese. Ọrụ nke bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya nwere mmetụta na-enweghị atụ karịa ntụrụndụ ka ọ na-ekpebi ụdị ejiji ya.
Onye ama ama n'etiti ndị ihe nkiri na -amasịkarị ya bụ Sponge Bob na o yighị ka o nwere ihe nkiri Sponge Bob zuru oke.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ hụrụ ya ka ọ na -eyi onye ọkpọ ọkpọ n'okpuru ya. Onye na -akụ ọkpọ (nke dị n'okpuru n'okpuru obere mkpụmkpụ) na -egosipụta agwa oke osimiri n'okpuru ngwa ya. N'ezie ịhụnanya ya maka eserese anaghị ama oke.
Nnukwu Nwa na Obi:
Batshuayi bụ onye na -eyighị ka ọ na -eme afọ ndụ ya dịka egosiri site na nchịkọta ihe egwuregwu ya. Nwa afọ 25 nwere nnukwu ihe egwuregwu ụmụaka nke ọ kọwara dị ka ebe ngosi nka nke ya.
“Ụlọ ihe ngosi nka nkeonwe” nwere nnukwu kabinet iko jupụtara na obere ihe egwuregwu anakọtara.
Ọbụghị naanị obere ihe ụmụaka ji egwuri egwu, Batshuayi yiri ka ọ chọtara nnukwu ihe egwuregwu ụmụaka nke yiri afọ ndụ ya. Ọ bụ ihe oyiyi zuru oke site na katoon a ma ama Dragon Ball Z.
Michy Batshuayi Biography Eziokwu - Ihe kpatara aha njirimara:
N'ihi ịhụnanya ya maka egwuregwu, Batshuayi nyere aha ahụ bụ 'Batsman', àgwà ọ masịrị ma kọwaa ya. A na-ewere àgwà àgwà Batman dị ka nke na-abịa site n'ọchịchịrị ime ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche.
Batshuayi sitere na bench ma ka na-eme anwansi nke ịmepụta ihe mgbaru ọsọ. N'ikwu okwu banyere ihe mgbaru ọsọ, Michy's FIFA 2018 World Cup ihe mgbaru ọsọ emume emezughị ya ka ọ hụrụ otu bọọlụ ọ gbara na ihe mgbaru ọsọ ọ na-agba na ihu ya.
Ụdị Michy Batshuayi:
Michy Batshuayi bụ onye hụrụ ihe ọ hụrụ n'anya n'anya ma na-ewepụta ọfụma ọchị ọbụlagodi na ihe anaghị aga etu o si ezube. Ka o sina dị, na-arụsi ọrụ ike ma na-anwa ike ya kachasị mma iji mee ka ihe ọ rụzuru ghara ịbụ nke na-enweghị isi.
Na mgbakwunye, Ọ na -eme enyi, na -enwe mmetụta nke diplọma, ma na -agba mbọ ike ya niile iji zere esemokwu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Michy Batshuayi Childhood Akụkọ na nkọwa ndị dị omimi. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.